धुने यन्त्रहरूका प्रकार - उपकरणहरू
धुने यन्त्रहरूका प्रकार
रेफ्रिजरेटरको साथसाथ, धुने मेसिन संसारभरका घरहरूमा पाइने सबैभन्दा सामान्य घरेलु उपकरण हो। सबै प्रकारका वाशिंग मेशिनहरूले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दछन्: कपडा र घरका सूतीहरू धुनु। र यो दैनिक आवश्यकता हो, धुलाई प्रक्रिया कम श्रमयुक्त र अधिक स्वच्छता प्रदान गर्ने सम्बद्ध इच्छाको साथ, जुन आजकल हामी परिचित छौं विभिन्न प्रकारको धुलाई मेशिनहरूको प्रभावशाली एरे ल्याउँदछ।
केही अपार्टमेन्ट र घरहरूले धुलाई र ड्रायर वा बेसमेंटमा सेट सहित लुन्ड्री कोठाहरू समर्पित गर्दछ। जबकि कोहीले धुलाई र ड्रायरलाई लक्जरी मान्दछन्, अरूले यसलाई आवश्यकको रूपमा हेर्छन्। अफरमा विभिन्न प्रकारका वाशिंग मेशिनहरू सधैं अपील हुनेछ यदि तपाईंलाई थाहा छ के तपाईंलाई आवश्यक छ।
टेक्नोलोजी दिनहुँ विकसित हुँदै, हामीले गर्ने दैनिक कामहरू सजिलो भएको छ। वाशिंग मेशिन त्यस्तै एक प्राविधिक आश्चर्य हो जसले हाम्रो जीवनलाई समस्यामुक्त बनाएको छ। तल दिइएका विभिन्न प्रकारका धुने मेसिनहरूको फाइदाहरूका केही हेरौं:
धुने मेशिनहरूले समय बचत गर्दछ
लुगा धुने मेसिनले हामीलाई हाम्रो लुगा धुने समयमा खर्च गर्ने समय बचत गर्न मद्दत पुर्‍यायो। धुने मेशिनहरूले पनि मल्टिटास्कलाई यस्तो तरिकाले मद्दत पुर्‍याएको छ जुन हामीले सोचेकै थिएन। जब हाम्रो कपडा मेशिनमा धुई रहेको छ, हामी केवल टाढा हिँड्न र सफा चक्र सकिए पछि फिर्ता आउन सक्छौं, केवल कपडाको कपडामा लुगा राख्ने।
धुने मेशिनहरू प्रयास बचत गर्नुहोस्
हाम्रो फोहोर लुगा धुने हातले धुने को शारीरिक कार्य धुलाई मेसिनको आगमन संगै हटाईएको छ। लुगा धुने प्रक्रिया र वासि washing मेशिनका विभिन्न सुविधाहरूले पनि हामीलाई हाम्रो कपडाहरूको राम्रो देखभाल गर्न मद्दत गर्दछ।
धुने मेशिनहरू विभिन्न चक्रको साथ आउँदछन्
तपाईंको पोशाकको प्रकार पूरा गर्नका लागि वाशिंग मेशिनहरू विभिन्न धुने चक्रको साथ आउँदछन्। भारी चक्र ठूलो बोझ को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। थप हेरचाह आवश्यक पर्ने वा नाजुक हुने लुगाहरूका लागि चक्रलाई त्यसरी नै सेट गर्न सकिन्छ तपाईको कपडा बिग्रनबाट बचाउनुहोस्। दाँया धुने चक्र प्रयोग गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले कपडाहरूलाई क्षतिग्रस्त हुनबाट बचाउँछ।
विभिन्न प्रकारका धुने मेशिनहरूलाई डिमासिफाई गर्दै
यसमा कुनै श is्का छैन कि आज उपलब्ध सबै विभिन्न प्रकारका वाशिंग मेशिनहरूले कपडा धुने राम्रो काम गर्छन्। के एक उपभोक्ता को रूप मा भ्रामक वा चकित हुन सक्छ विविधता हो।
आज, बजारमा लगभग आधा दर्जन विभिन्न प्रकारका वाशिंग मेशिनहरू उपलब्ध छन्। प्रत्येक परिवारको आ-आफ्नै आवश्यकता हुन्छ, र पहिले आफ्नो अवस्थाको लागि उपयुक्त हुने धुलाई मेसिनहरूको प्रकारहरू जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
बिभिन्न प्रकारको वाशिंग मेशिनहरूमा डाउन डाउन प्राप्त गर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस् जुन हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरू पूरा गर्नको लागि हाम्रो पूर्ण ग्रो-टु हो।
१ फ्रन्ट-लोडिंग धुने मेशिनहरू
दुई धुने र ड्रायर कम्बो
।। पोर्टेबल वा कम्प्याक्ट
। शीर्ष-लोड हुँदै
9 प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: धुने मेशिनका प्रकारहरू
फ्रन्ट-लोडिंग धुने मेशिनहरू
यो छनौट गर्नको लागि उत्तम किसिमको धुलाई मिसिन हो जुन तपाईंसँग तपाईंको मसिनको लागि सानो क्षेत्र छ र सजीलै धेरै भारहरू चलाउन सक्षम हुनु आवश्यक छ। A फ्रन्ट लोडिंग वाशिंग मेशीन ड्रायरको साथ स्ट्याक गर्न सकिन्छ फ्लोर स्पेसको सट्टा अधिक ठाडो ठाउँ लिन, यदि आवश्यक छ भने। यीसँग सामान्यतया धेरै ठूलो इन्टरियर हुन्छ जसले तपाईंलाई मेशीनको सफा शक्ति त्याग नगरी बल्क वस्तुहरू वा ठूला भारीहरू धुउन अनुमति दिन्छ। यद्यपि तिनीहरू ठूला भारहरू चल्नका लागि उत्कृष्ट छन्, तिनीहरूलाई सबै प्रकारको धुलाई मेशिनहरू मध्ये सबैभन्दा कुशल पनि मानिन्छ किनभने तिनीहरूलाई लोडको लागि पानी कम चाहिन्छ।
धुने र ड्रायर कम्बो
धुने-ड्रायर कम्बोहरू धुने र ड्रायरको सेटको रूपमा मिल्दैन, बरु एकल उपकरण हुन् जसमा दुबै धुने यन्त्र र ड्रायरको लागि एक क्याबिनेट हुन्छ। जबकि तिनीहरू जताततै लोकप्रिय छैनन्, धेरै साना घरहरू वा अपार्टमेन्टहरूमा बस्ने मानिसहरूका लागि, तिनीहरू महान हुन सक्दछन् किनकी तिनीहरू सबैमा धेरै कोठा लिदैनन्।
एकीकृत वाशिंग मेशिनको साथ सामान्य विचार यो हो कि मेसिनको अगाडि कपाटको ढोका लगाइएको हुन्छ। प्राय: यो भान्छामा स्थापना गरिएको हो, अन्य ठाउँमा होइन कि भान्साको एकाईले मेशिनलाई स्थिरता प्रदान गर्दछ, र यो सजावटसँग मिल्दछ।
एक stackable वाशर ड्रायर ड्राईभर पूर्ण सेवा लाँड्री क्षमताहरू खोज्नेहरूका लागि राम्रो विकल्प हो, तर सीमित स्थानको साथ। धुलाई केन्द्रको रूपमा पनि चिनिन्छ, स्ट्याकेबल धुने-ड्रायर ड्राईभर एउटा कन्फिगरेसन हो जहाँ ड्रायर यसको अगाडि नभई धुलोको माथि राखिन्छ।
पोर्टेबल वा कम्प्याक्ट
पोर्टेबल वाशिंग मेशिनहरू आदर्श उपकरणहरू हुन् यदि तपाईं एक अपार्टमेन्ट वा सानो घरमा बस्दै हुनुहुन्छ भने, र एक पूर्ण आकारको धुलाई विकल्प छैन। पोर्टेबल धुने मेशिनहरू क्षमतामा सानो छन्, त्यसकारण, तिनीहरू छनौट गर्नुपर्छ जब तपाईंसँग पूर्ण आकारको मेशीनको लागि ठाउँ छैन।
यी वाशिंग मेशिनहरूको छोटो चक्र छ र दुवै खरीद गर्न र मर्मत गर्न धेरै कम महँगो छ। तपाइँले चाहनुभएको चक्रको प्रकार छनौट गर्न उनीहरूले एक धेरै साधारण नियन्त्रण प्यानल प्रयोग गर्दछन्, र यो प्यानल अविश्वसनीय रूपमा सजिलो छ धेरै व्यक्तिहरूलाई कुनै भ्रम बिना सञ्चालन गर्न। दुर्भाग्यवस, जब तपाईं धुनुहोस् धेरै वस्तुहरू राख्नुहुन्छ, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि तपाईंको मेसिनले ठूलो कामको रूपमा गर्न सकेन, र यस प्रकारको वाशिंग मेशिनले कहिलेकाँही स्पिनको बखत सबै पानी बाहिर निकाल्न समस्या गर्दछ। चक्र
एक अर्ध स्वचालित वाशिंग मेशिनमा दुई टबहरू हुन्छन्, एउटा धुनेको लागि र अर्को सुकाउनेको लागि। लुगा धुने पछि, यदि सुक्खा आवश्यक छ भने, लुगा सुकाउने चक्रको लागि म्यानुअल रूपमा सुकाउने ट्याबमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
यो धुलाई मेसिनको सबैभन्दा सामान्य प्रकार हो। लुगा धुने टबमा राखिन्छ, र ढक्कन बन्द छ। एक पटक आवश्यक कार्यहरू सेट गरिसकेपछि, मेशिनले स्वचालित रूपमा काम गर्दछ र सम्पूर्ण चक्र धुनेदेखि सुख्खासम्म पूरा गर्दछ। तपाईं केवल धुनुहोस्, वा धुनुहोस् र सुक्खा, वा मोडेल विवरण अनुसार अन्य कुनै प्रकार्यहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू: धुने मेशिनका प्रकारहरू
Q. कुन राम्रो छ - एउटा शीर्ष लोडि washing धुने मेशीन वा फ्रन्ट-लोडि washing धुने मेशीन?
TO यो बहु कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। फ्रन्ट लोडिंग वाशिंग मेशिनले पानी बचत गर्दछ तर अधिक महँगो हुन्छ। शीर्ष लोडिing्ग धुने मेशिनहरू प्रयोग गर्नको लागि अधिक सुविधाजनक छन् किनकि तपाईं लुगा लोड र अनलोड गर्न झुकनु पर्दैन।
Q. कुन किन्नु राम्रो छ - अर्ध वा पूर्ण स्वचालित वाशिंग मेशीन?
TO पूर्ण-स्वचालित। यसका बारे कुनै दुई तरिकाहरू छैनन्। यदि तपाईंको बजेट सानो छ भने मात्र सेमी-स्वचालित वाशिंग मेशिनहरू विचार गर्नुहोस्। अर्ध-स्वचालित मेशिनहरू ज्यादै धेरै समस्यामा छन्। सम्पूर्ण धुलाई प्रक्रिया समय खपत र थकाउने हो। तपाईं प्रत्येक चरण पछि उपस्थित हुनु आवश्यक छ - धुनुहोस्, धुनुहोस् र सुक्नुहोस्। अर्कोतर्फ, पूर्ण रूपले स्वचालित मेशिनहरूले तपाईं त्यहाँ हुनु बिना नै सम्पूर्ण धुलाई चक्र पूरा गर्दछ।
Q. कुन कपडालाई बढी हानि पुर्‍याउँछ - धुने वा ड्रायर?
TO यो सबै तपाईं कसरी धुने मेसिन प्रयोग गर्नुहुन्छमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं उच्च सेटिंग्सको साथ नाजुक लुगा धुनुभयो वा सुक्नुभयो भने, त्यहाँ नाजुक कपडा बिग्रने संभावनाहरू छन्।
Q. धुने मेशीन खरीद गर्दा मैले कुन पक्षहरूमा विचार गर्नुपर्छ?
TO क्षमता, ठाउँ आवश्यकता, प्रकार, बजेट, र ब्रान्ड - यी कारकहरू तपाईंलाई चाहिन्छ एक धुने मेसिन खरीद गर्दा विचार गर्नुहोस् ।
यो पनि पढ्नुहोस्: शीर्ष इलेक्ट्रिक किचन उपकरणहरू
पेट को बोसो घटाउन को लागी crunches
कसरी अनुहारको कपाल प्राकृतिक रूप बाट हटाउने
अघि र पछाडि कपालको वृद्धिको लागि बदामको तेल
स्वभाविक रूपमा घरमा छालाको लागि चमक